U Iibso Cidhibta Sare ee Fidinta Kabaha Kabaha Canqowga Canqawga Dumarka - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Kabaha Cidhibta Sare ee Kabaha Kabaha Kabaha Canqawga Dumarka
$ 48.99 qiimaha joogtada ah $ 72.99
Tirada kabaha 5 6 6.5 7.5 8.5 9 10 4 11
Beige 9CM / 5 Beige 9CM / 6 Beige 9CM / 6.5 Beige 9CM / 7.5 Beige 9CM / 8.5 Beige 9CM / 9 Madow 9CM / 5 Madow 9CM / 6 Madow 9CM / 6.5 Madow 9CM / 7.5 Madow 9CM / 8.5 Madow 9CM / 9 Beige 9CM / 10 Beige 9CM / 4 Madow 9CM / 10 Madow 9CM / 4 Madow 7CM / 6.5 Madow 7CM / 7.5 Madow 7CM / 5 Madow 7CM / 6 Madow 7CM / 10 Madow 7CM / 11 Madow 7CM / 8.5 Madow 7CM / 9 Beige 7CM / 7.5 Beige 7CM / 8.5 Beige 7CM / 6 Beige 7CM / 6.5 Beige 7CM / 11 Madow 7CM / 4 Beige 7CM / 9 Beige 7CM / 10 Beige 7CM / 4 Beige 7CM / 5 Beige 9CM / 11 Madow 9CM / 11
Kabaha Cidhibta Sare ee Fidinta Kabaha Kabaha Canqowga ee Haweenka - Beige 9CM / 5 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Qalabka Sare: Tolidda
Dhererka Boot: Anqawga
Cunsurka Dharka: tolidda
Nambarka Tusaalaha: 31941
Qalabka Dahaarka: Microfiber
Waxyaabaha usheeda dhexe: mesh (mesh hawada)
Nooca Shayga: Kabaha
Kabaha ayaa yimid toddobaad gudihiis. U dhigma tilmaanta. Aad u raaxo badan, ciribta lama dareemo, waxay qaadatay 9 cm. Aad ayaan u faraxsanahay
Markay tahay 37.5 cabbirka lugta ballaaran ee Ruushku wuxuu qaatay 9, si fiican ayuu u fadhiistay. Waxaa jira kayd yar oo ku yaal sharaabaadda nylon. Kabaha cajiibka ah
Aad u qurux badan! Wuxuu yimid toddobaad gudaheed! (Waxaan qaadan lahaa cabbir intaa ka sii badan) laakiin weli qurux badan !!!
Wax walba way soo baxeen) mahadsanid) markay 36 ahayd waxay qaadatay 37, kaligeed waa la arki karaa. Waxay ahayd qiyaastii bil. Lugta ayaa qurux badan.
Kabo qurxoon, oo aad loo qurxiyay! Waxaan haystaa 39 (25 cm) joogto ah oo la dalbaday 40 waana kaamil. Haddii aad leedahay 38.5/39 waxaan soo jeedinayaa 39.